Uhlelo lwe-Elementary & High School - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ezemfundo Kwelinye IzweUhlelo Lwesisekelo & Oluphezulu
Uhlelo Lwesisekelo & OluphezuluEzemfundo Kwelinye Izwe
Uhlelo Lwesisekelo & OluphezuluFunda, Hlola, Thola nokukhula
Ngabe ufuna amathuba okufunda phesheya?
I-BLI ikunika uhlelo lwe-EHEP (Uhlelo oluyisisekelo nolwesikoleni esiphakeme). Lolu hlelo luzocebisa imfundo yakho yesikole e-Elementary noma High ukukunikeza ithuba lokuba isikhulumi saseNgisi ngokushelelayo futhi ujabulele imisebenzi eminingi yemfundo yaseCanada enikeza abafundi babo.
I-EHEP inikeza ithuba eliyingqayizivele lokuzicwilisa ohlelweni lwezemfundo yaseCanada. Uzohlanganiswa esikoleni samabanga aphansi noma esikoleni samabanga aphansi (amamaki 3 nge-11) ngokweminyaka yakho kanye nebanga okwamanje ungena ezweni lakini lapho uhlala nomndeni waseCanada.
Uzoba nethuba lokubamba iqhaza emisebenzini yamasiko kanye nokuvakasha. Uzoba nethuba lokuthola izinga eliphakeme lokuqhakambisa isiNgisi kanye nokufunda isiFulentshi. Uzobekwa esikhungweni semfundo yendawo futhi uzothola nethuba lokuzihlanganisa nezitshudeni zasekhaya nezakwamanye amazwe.
Uhlelo Lonyaka: 1 unyaka wezifundo
Uhlelo Semester: 1 Semester Semfundo Yezemfundo
Uhlelo Lokuhlangenwe Nakho: Amaviki amane kuya kwayi-4
Izinsuku Zokuqalisa Zohlelo:
Uhlelo Lonyaka: Agasti
Uhlelo Semester: Agasti / Ubusika
Uhlelo Lokuzwa: Sicela uxhumane nathi
* Izinhlelo zeqembu zingafakwa ngokwezifiso ngokwesicelo. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Izidingo zokungena kanye nenqubo yokufaka isicelo
Kumele ube phakathi kwe-6 neminyaka engu-17 ubudala ngesikhathi uhlelo luqala
Kufanele ube nezinga eliphakathi lesiNgisi (Uma umfundi engafinyeleli kwisidingo esiphansi se-English (i-BLI Intermediate 3), kuzodingeka ukuthi athathe uhlelo lwethu lwesiNgisi Olunamandla ngaphambi kosuku lokuqala kohlelo lwakhe lwesikole esiphakeme imali eyengeziwe. Sicela ubheke General ESL, isakhiwo se-FSL yesakhiwo.)
Kumelwe ufake isicelo sezinyanga ubuncane bezinyanga ze-3 ngaphambi kwedethi yokuqala yokufunwa
Kumelwe ufunde njengamanje ezweni lakini
Gcwalisa ifomu lesicelo lesicelo
Nikeza umsebenzi olandelayo wephepha
Ikhophi yakamuva yekhadi lakho lombiko
Ikhophi yesitifiketi sokuqala nesiphendulelwe sokuzalwa
Yonke imibhalo edingekayo ukucubungula i-CAQ
Lapho isicelo sakho samukelwe ukhokha imali yokubhalisa, (engabuyiselwa). Izimali ezikhokhiswayo zohlelo kufanele zikhokhwe kumaviki amane ngaphambi kokuqala kohlelo lwakho.
Ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza (thatha bese ulahla)
Indawo yokuhlala yekhaya elilodwa
Ukudla okungu-3 ngosuku (okunikezwe ngumndeni owamukelayo)
Amayunifomu (* amanani ayahluka ngokuya ngesikole esikhethiwe)
Imali ye-CAQ nemali ye-visa nenqubo
Imali ekhokhwayo yensiza
ISanta Lambert High
ISt John's High
* Ezinye izikole ezitholakala ngesicelo
Uhlelo lwethu lwasekhaya luzonikeza abafundi ithuba lokuntywila ngokwamasiko nolimi lwaseCanada. Bazophila isipiliyoni somndeni. Yonke imindeni yethu ibamba ngokukhethwa ngokucophelela futhi kufanele ihlangabezane nenqubo yekhwalithi ye-BLI. Siqinisekisa ukuthi wonke amakhaya asekhaya ahlangabezana nezindinganiso zokuphepha nezenhlanzeko futhi enza inqubo ekhethiwe yokuqokwa.
Abafundi bahlinzekwa ngokudla okunempilo oku-3 ngosuku kusuka emndenini ophethe.